တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် လာအိုပြည်သူ့ တပ်မတော်၊ စစ်ဦးစီးဌာန အကြီးအကဲ Lt. Gen. Souvone LEUANGBOUNMY အားဂုဏ်ပြုကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
ဧပြီ ၂၆၊ ၂၀၁၈
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် လာအို ပြည်သူ့တပ်မတော်၊ စစ်ဦးစီးဌာနအကြီးအကဲ Lt. Gen. Souvone LEUANGBOUNMY အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိဇေယျာသီရိဗိမာန်ရှေ့၌ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ဖြင့်ကြိုဆိုသည်။
ဦးစွာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် လာအိုပြည်သူ့တပ်မတော်၊ စစ်ဦးစီး ဌာနအကြီးအကဲတို့သည် ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့၏ အလေးပြုခြင်းကိုခံယူကြပြီး ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ကိုလိုက်လံ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။ ယင်းနောက်အခမ်းအနား တက်ရောက်လာကြသော နှစ်နိုင်ငံ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများကို အပြန်အလှန် မိတ်ဆက်ပေးကြသည်။
အဆိုပါဂုဏ်ပြုကြိုဆိုပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ဒုတိယ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦး၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်စန်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်ကျော်နှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး လာအိုပြည်သူ့တပ်မတော်၊ စစ်ဦးစီးဌာနအကြီးအကဲနှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လာအိုနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Lyying SAYAXANG လာအိုပြည်သူ့တပ်မတော်မှ အရာရှိကြီးများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလာအိုနိုင်ငံစစ်သံမှူးတို့ တက်ရောက်ကြသည်။
ထို့နောက် လာအိုပြည်သူ့တပ်မတော်၊ စစ်ဦးစီးဌာနအကြီးအကဲသည် ဇေယျာသီရိဗိမာန် ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင် မှတ်တမ်းတင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က မြန်မာ- လာအို နှစ်နိုင်ငံသည် အိမ်နီးချင်းကောင်းနိုင်ငံများဖြစ်ပြီး မိတ်ဆွေဟောင်း၊ မိတ်ဆွေကောင်း နိုင်ငံများဖြစ်ကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံယဉ်ကျေးမှု၊ ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာနှင့် ထုံးတမ်း စဉ်လာများတူညီမှုရှိပြီး နယ်စပ်ဒေသတွင်နေထိုင်သည့်တိုင်းရင်းသားများမှာတူညီသည့် တိုင်းရင်းသားများဖြစ်သဖြင့် ညီရင်းအစ်ကိုနိုင်ငံများသဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံခေါင်း ဆောင်များအနေဖြင့်လည်း ရှေးယခင်ကတည်းက ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာဖြင့်ဆက်ဆံမှုများ ရှိခဲ့ပြီး အပြန်အလှန်ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်များလည်ပတ်ခဲ့ကြောင်း၊ ယခုအချိန်တွင်လည်း နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတိုးမြှင့်ရေးအတွက် အားကစားအဖွဲ့များနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များအပြန်အလှန်စေလွှတ်လျက်ရှိကြောင်းပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် ဧည့်သည်တော် လာအိုပြည်သူ့တပ်မတော်၊ စစ်ဦးစီးဌာနအကြီး အကဲက တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၏ဖိတ်ကြား ချက်အရ ယခုကဲ့သို့မြန်မာနိုင်ငံသို့ချစ်ကြည်ရေးခရီးလာရောက်ရသည့်အတွက် ၀မ်းမြောက် ဂုဏ်ယူပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါကြောင်း၊ မိမိတို့နှစ်နိုင်ငံသည် အစဉ်အလာကောင်းများရှိသည့်အိမ်နီးချင်းကောင်းနိုင်ငံများဖြစ်ပြီး နယ်စပ်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိသည့် နှစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော် နှစ်ရပ်အကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုများ ကောင်းမွန်လျက်ရှိပြီးပိုမိုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်လာရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာ့တပ်မတော်မှနိုင်ငံတော်နှင့်ပြည်သူများ အတွက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေသည်ကို လာအိုနိုင်ငံအနေဖြင့် ထောက်ခံပါကြောင်း၊ လာအိုနိုင်ငံအပေါ်မြန်မာနိုင်ငံမှ ကူညီထောက်ပံ့မှုများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားသည်။
ထို့နောက် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ နှင့် ဆေးဘက်နည်းပညာများအပြန်အလှန်ဖလှယ်၍ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ အနာဂါတ် တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ဆောင်ရွက်ရေးနှင့် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား အဆင့်အလိုက်ချစ်ကြည်ရေးခရီးစဉ်များအပြန်အလှန် လည်ပတ်ရေး၊ အားကစားအဖွဲ့များနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့များ အပြန်အလှန်စေလွှတ်ရေး၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအတွက် အတွေ့အကြုံများဖလှယ်ရေး၊ နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာအမြင်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် လာအိုပြည်သူ့ တပ်မတော်စစ်ဦးစီးဌာနအကြီးအကဲတို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ပေးအပ်ကြပြီး တက်ရောက်လာကြသူများနှင့်အတူစုပေါင်းဓာတ်ပုံ ရိုက်ခဲ့ကြသည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ လာအို ပွညျသူ့တပျမတျော၊ စဈဦးစီးဌာနအကွီးအကဲ Lt. Gen. Souvone LEUANGBOUNMY အား ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိဇယြောသီရိဗိမာနျရှေ့၌ဂုဏျပွုတပျဖှဲ့ဖွငျ့ကွိုဆိုသညျ။
ဦးစှာ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ လာအိုပွညျသူ့တပျမတျော၊ စဈဦးစီး ဌာနအကွီးအကဲတို့သညျ ဂုဏျပွုတပျဖှဲ့၏ အလေးပွုခွငျးကိုခံယူကွပွီး ဂုဏျပွုတပျဖှဲ့ကိုလိုကျလံ ကွညျ့ရှုစဈဆေးသညျ။ ယငျးနောကျအခမျးအနား တကျရောကျလာကွသော နှဈနိုငျငံ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြားကို အပွနျအလှနျ မိတျဆကျပေးကွသညျ။
အဆိုပါဂုဏျပွုကွိုဆိုပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ဒုတိယ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ကွညျး) ဒုတိယဗိုလျခြုပျမှူးကွီး စိုးဝငျး၊ ညှိနှိုငျးကှပျကဲရေးမှူး(ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး မွထှနျးဦး၊ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျ(ရေ) ဗိုလျခြုပျကွီးတငျအောငျစနျး၊ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(လေ) ဗိုလျခြုပျကွီး မောငျမောငျကြျောနှငျ့ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံး(ကွညျး)မှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား တကျရောကျကွပွီး လာအိုပွညျသူ့တပျမတျော၊ စဈဦးစီးဌာနအကွီးအကဲနှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ လာအိုနိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Lyying SAYAXANG လာအိုပွညျသူ့တပျမတျောမှ အရာရှိကွီးမြားနှငျ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာလာအိုနိုငျငံစဈသံမှူးတို့ တကျရောကျကွ သညျ။
ထို့နောကျ လာအိုပွညျသူ့တပျမတျော၊ စဈဦးစီးဌာနအကွီးအကဲသညျ ဇယြောသီရိဗိမာနျ ဧညျ့သညျတျောမှတျတမျးစာအုပျတှငျ မှတျတမျးတငျလကျမှတျရေးထိုးပွီး တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ ဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ဆှေးနှေးရာတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျက မွနျမာ- လာအို နှဈနိုငျငံသညျ အိမျနီးခငျြးကောငျးနိုငျငံမြားဖွဈပွီး မိတျဆှဟေောငျး၊ မိတျဆှကေောငျး နိုငျငံမြားဖွဈကွောငျး၊ နှဈနိုငျငံယဉျကြေးမှု၊ ကိုးကှယျသညျ့ဘာသာနှငျ့ ထုံးတမျး စဉျလာမြားတူညီမှုရှိပွီး နယျစပျဒသေတှငျနထေိုငျသညျ့တိုငျးရငျးသားမြားမှာတူညီသညျ့ တိုငျးရငျးသားမြားဖွဈသဖွငျ့ ညီရငျးအဈကိုနိုငျငံမြားသဖှယျဖွဈကွောငျး၊ နှဈနိုငျငံခေါငျး ဆောငျမြားအနဖွေငျ့လညျး ရှေးယခငျကတညျးက ခဈြကွညျရငျးနှီးစှာဖွငျ့ဆကျဆံမှုမြား ရှိခဲ့ပွီး အပွနျအလှနျခဈြကွညျရေးခရီးစဉျမြားလညျပတျခဲ့ကွောငျး၊ ယခုအခြိနျတှငျလညျး နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုတိုးမွှငျ့ရေးအတှကျ အားကစား အဖှဲ့မြားနှငျ့ ယဉျကြေးမှုအဖှဲ့မြားအပွနျအလှနျစလှေတျလကျြရှိကွောငျးပွောကွားသညျ။
ယငျးနောကျ ဧညျ့သညျတျော လာအိုပွညျသူ့တပျမတျော၊ စဈဦးစီးဌာနအကွီး အကဲက တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ၏ဖိတျကွား ခကျြအရ ယခုကဲ့သို့မွနျမာနိုငျငံသို့ခဈြကွညျရေးခရီးလာရောကျရသညျ့အတှကျ ၀မျးမွောကျ ဂုဏျယူပါကွောငျး၊ မွနျမာနိုငျငံ၏တိုးတကျပွောငျးလဲမှုမြားကိုလညျးတှမွေ့ငျရပါကွောငျး၊ မိမိတို့နှဈနိုငျငံသညျ အစဉျအလာကောငျးမြားရှိသညျ့အိမျနီးခငျြးကောငျးနိုငျငံမြားဖွဈပွီး နယျစပျဒသေတညျငွိမျအေးခမျြးမှုရှိသညျ့ နှဈနိုငျငံဖွဈပါကွောငျး၊ နှဈနိုငျငံတပျမတျော နှဈရပျအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုမြား ကောငျးမှနျလကျြရှိပွီးပိုမိုတိုးမွှငျ့ဆောငျရှကျနိုငျရေး အတှကျလာရောကျခွငျးဖွဈကွောငျး၊ မွနျမာ့တပျမတျောမှနိုငျငံတျောနှငျ့ပွညျသူမြား အတှကျ ငွိမျးခမျြးရေးနှငျ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးလုပျငနျးမြားဆောငျရှကျနသေညျကို လာအိုနိုငျငံအနဖွေငျ့ ထောကျခံပါကွောငျး၊ လာအိုနိုငျငံအပျေါမွနျမာနိုငျငံမှ ကူညီထောကျပံ့မှုမြားကိုလညျး ကြေးဇူးတငျရှိပါကွောငျးပွောကွားသညျ။
ထို့နောကျ နှဈနိုငျငံတပျမတျောနှဈရပျအကွား လကေ့ငျြ့ရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားနှငျ့ ဆေးဘကျနညျးပညာမြားအပွနျအလှနျဖလှယျ၍ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး၊ အနာဂါတျ တှငျ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျမှုမြားပိုမိုတိုးတကျကောငျးမှနျအောငျ ဆောငျရှကျရေးနှငျ့ တပျမတျောနှဈရပျအကွား အဆငျ့အလိုကျခဈြကွညျရေးခရီးစဉျမြားအပွနျအလှနျ လညျပတျရေး၊ အားကစားအဖှဲ့မြားနှငျ့ယဉျကြေးမှုအဖှဲ့မြား အပွနျအလှနျစလှေတျရေး၊ သဘာဝဘေးအန်တရာယျကာကှယျရေးအတှကျ အတှအေ့ကွုံမြားဖလှယျရေး၊ နှဈနိုငျငံ နယျစပျဒသေဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ တပျမတျောနှဈရပျအကွား ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေး ဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားကို ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာအမွငျခငျြးဖလှယျဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ လာအိုပွညျသူ့ တပျမတျောစဈဦးစီးဌာနအကွီးအကဲတို့သညျ အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးမြား အပွနျအလှနျပေးအပျကွပွီး တကျရောကျလာကွသူမြားနှငျ့အတူစုပေါငျးဓာတျပုံ ရိုကျခဲ့ကွသညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် လာအိုပြည်သူ့တပ်မတော်၊ စစ်ဦးစီးဌာနအကြီးအကဲ Lieutenant General Souvone LEUANGBOUNMY အား ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့ဖြင့်ကြိုဆို၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဘဝနတ်ထံပျံလွန်တော်မူခဲ့သည့် သက်တော်ရှည် ဂိုဏ်းထောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တကောဝိဒ၏ ဥတုဇရုပ်ကလပ်အား သွားရောက်ဖူးမြော်ကြည်ညို (ရုပ်သံသတင်း)
အောက်တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၈ Admin 0